Doorashada Madaxweynaha Jubaland oo Maanta Ama Beri midood dhaceysa. – SBC
Doorashada Madaxweynaha Jubaland oo Maanta Ama Beri midood dhaceysa.
Afhayeenka Maamulka Kumeelgaarka ah ee Magaalada kismaayo ayaa saxaafada ka shaaciyay in doorashada Madaxweynaha maamulka dhismihiisu ka socdo magaaladaas ay dhici doonto saacadaha nagu soo foolleh.
C/naasir Seeraar Afhayeenka Kumeelgaarka ah ee maamulkaasi Kismaayo ayaa sheegay in ay is diiwaan geliyeen dhamaan xubnihii dooran lahaa madaxweynaha Maamulka Jubaland ayna harsantahay oo keliya doorashadii, ayna dhici doonto maanta oo talaado ah ama berito oo Arbaca ah.
Afhayeenka waxaa uu intaasi raaciyay in laga soo gudbay heerrarkii kala duwanaa ee soo bagacaabista ergooyinka laga sugayay beelaha ka qeyb galaya shirka ayna shalay oo isniin aheyn isa soo diiwaan geliyeen, 500 oo ergo .
Dhowaan waxaa la doranayaan madaxweyne cusub oo uu yeesho maamulka Jubaland la baxay ee Shirkii lagu dhisayay gaba gabadiisa magaalada Kismaayo ka socda, waxaana taasi siweyn u soo dhaweynaya mushtamaca reer Jubaland iyo kuwa kale ee Soomaaliyeed.
Taageero buuxda ayuu heli doonaa hadii uu hirgalo Maamulka Jubaland waxaa sidaasi yiri dadka u saaxiibka ah ka hadalka iyo falanqeynta Siyaasada Soomaaliya.
Sikastaba ha ahaatee waxaa laga dhursugayaa halka ay ku dambeyso doorashada Madaxweynaha Maamulka Jubaland iyo sida ay u dhacdo, maadaama lagu dhawaaqay xiliga ay dhaceyso.